Football Khabar » ला लिगा : ‘तनावपूर्ण खेल’मा गेटाफेद्वारा भ्यालेन्सियाको धुलाइ !
ला लिगा : ‘तनावपूर्ण खेल’मा गेटाफेद्वारा भ्यालेन्सियाको धुलाइ !
अघिल्लो साता मात्रै बार्सिलोनालाई २–० ले हराएको स्पेनिस क्लब भ्यालेन्सियाले ला लिगा फुटबलमा नमिठो हार भोगेको छ । शनिबार राति भएको लिगको २३औं खेलमा भ्यालेन्सियालाई गेटाफेले आफ्नो घरेलु मदानमा ३–० ले स्तब्ध बनायो ।
तनावपूर्ण खेलमा दुईपटक खेलाडीबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । जसमा खेलभरिमा ७ पहेंलो कार्ड झरे पनि भ्यालेन्सियाका एक खेलाडीले रातो कार्ड पाए । विपक्षी खेलाडीमाथि गम्भीर फउल गरेपछि खेलको ७८औं मिनेटमा भ्यालेन्सियाका एलेसान्ड्रो फ्लोरेन्जीलाई रेफ्रीले सोझै रातो कार्ड दिएर मैदानबाट निकालेका थिए ।
त्यसअघि पनि फउलको विषयमा दुई खेलाडीबीच झडप भएके थियो । जसका कारण केहीबेर खेलै रोकिएको थियो । पछि रेफ्रीले एकैपटक ४ जना खेलाडीलाई पहेंलो कार्ड दिए ।
आफ्नो घरमा गेटाफेलाई प्रभावशाली जित दिलाउन जोर्गे मोलिना भिडालले २ गोल गरे । खेलको पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । तर, दोस्रो हाफमा घरेलु टोली गेटाफे हाबी भयो । जहाँ ५८औं मिनेटमा गेटाफेका लागि भिडालले पहिलो गोेल गरे भने उनैले ६७औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । त्यसपछि खेलको ८७औं मिनेटमा जिमी माटाले गोल गरेपछि खेल गेटाफेले ३–० ले जित्यो ।
अब यो जितपछि गेटाफेले २३ खेलबाट ४२ अंक बनाएरको छ । र, ऊ अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा चढेको छ । पराजित भ्यालेन्सिया ३७ अंकसहित पाँचौं स्थानमा यथावत छ ।
प्रकाशित मिति २५ माघ २०७६, शनिबार २२:४६